MATIU 26 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 26)
Mgbe Jisọs kwusịrị okwu ndị a, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya okwu sị,
“Dị ka unu maara nke ọma, mmemme ngabiga ga-amalite mgbe ụbọchị abụọ gasịrị. Nꞌoge ahụ a ga-ararakwa m nye ka a kpọgide m nꞌobe.”
Nꞌoge ahụ, ndị isi nchụaja na ndị ozizi iwu, na ndị okenye ndị Juu zukọtara nꞌime ụlọ Kaịfas onyeisi nchụaja.
Ha gbara izu ịchọpụta ụzọ ha ga-esi jide Jisọs na nzuzo gbuo ya.
Ha kwekọrịta sị, “Anyị agaghị egbu ya tutuu mmemme ngabiga agafechaa, ka ọ hapụ iweta ọgba aghara nꞌetiti ndị bịara maka mmemme ahụ.”
Jisọs jere Betanị, banye nꞌụlọ nwoke a na-akpọ Saịmọn, onye ekpenta.
Mgbe ọ nọ na-eri nri nꞌebe ahụ, otu nwanyị batara nꞌime ụlọ ahụ. O ji karama mmanụ otite dị oke ọnụ ahịa nꞌaka ya. O meghere mmanụ ahụ wụọ ha nile nꞌisi Jisọs.
Ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ihe nwanyị a mere wee iwe nke ukwuu nꞌihi ya. Ha sịrị, “Nke a bụ nnọọ itufu ego!
A gaara erepụta mmanụ a ego dị ukwuu were ego e retara nyere ndị ogbenye aka.”
Unu na ndị ogbenye ga-anọ oge nile, ma ọ bụghị mụ na unu ga-anọ mgbe nile.
Ihe nwanyị a mere, ịwụ m mmanụ a nꞌahụ, bụ idozi ahụ m nꞌihi olili nke a ga-eli ya.
Nꞌezie, ana m agwa unu sị, na ebe ọ bụla e zisara ozi ọma a nꞌuwa nile, a ga na-echeta nwanyị a nꞌihi ihe ọma a o meere m.”
Mgbe ahụ otu nꞌime mmadụ iri na abụọ na-eso ụzọ ya, onye aha ya bụ Juda Iskariọt, jekwuuru ndị isi nchụaja.
Ọ jụrụ ha ajụjụ sị, “Ego ole ka unu ga-akwụ m ma ọ bụrụ na m arara Jisọs nye nꞌaka unu?” Ha kwekọrịtara kwụọ ya iri mkpụrụ ọlaọcha atọ.
Site nꞌụbọchị ahụ, Judas chọgidesịrị ohere ike ịrara Jisọs nye nꞌaka ha.
Nꞌụbọchị mbụ nke mmemme ngabiga, ndị na-eso ụzọ Jisọs bịakwutere ya jụọ ya sị, “Ebee ka ị chọrọ ka anyị nọrọ dozie ihe nꞌihi oriri anyị?”
Jisọs zara ha sị, “Jekwurunụ otu nwoke nꞌime obodo sị ya, Onye ozizi anyị sịri na oge m abịala. Mụ na ndị na-eso ụzọ m ga-eri oriri mmemme ngabiga anyị nꞌụlọ gị.”
Ndị na-eso ụzọ ya mere dị ka ọ gwara ha, doziekwa oriri anyasị ahụ nꞌebe ahu.
Nꞌanyasị ụbọchị ahụ, Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ahụ nọdụrụ ala na-eri oriri ahụ.
Mgbe ha na-eri nri, Jisọs kwuru sị, “Ana m agwa unu eziokwu, otu onye nꞌime unu ga-arara m nye nꞌaka ndị ga-egbu m.”
Okwu a wutere ndị na-eso ụzọ ya nke ukwuu. Ha malitere ịjụ ya nꞌotu nꞌotu sị, “Onyenwe anyị, ọ bụ m? Ọ bụ m?”
Ma Jisọs zara ha sị, “Ọ bụ onye ahụ mụ na ya na-erikọ nri nꞌotu efere.
Lee na mụ bụ Nwa nke mmadụ ga-anwụ dị ka e si buo ya nꞌamụma. Ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ a ga-esite nꞌaka ya rara m nye nꞌaka ndị ga-egbu m. Ọ gaara akara ya onye ahụ mma ma a sị na a mụghị ya amụ.”
Judas, onye ahụ ga-arara ya nye biliri ọtụ jụọ ya sị, “Onye ozizi ọ bụ m?” Jisọs zara sị, “Ee, ọ bụ gị.”
Mgbe ha nọkwa na-eri nri, Jisọs were ogbe beredi gọzie ya. Ọ nyawara ya nye ndị na-eso ụzọ ya sị ha, “Naranụ beredi a rie, nꞌihi na nke a bụ anụ ahụ m.”
Mgbe ahụ kwa, ọ naara iko mmanya vaịnị nye Chineke ekele nꞌihi ya, nyekwa ha ndị na-eso ụzọ ya sị ha, “Unu nile ṅụọnụ site nꞌiko a.
Nꞌihi na nke a bụ ọbara m nke bụ akara ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ. A na-awụsa ya nꞌihi mgbaghara mmehie ọtụtụ mmadụ.
Ana m agwa unu eziokwu mgbe m na-asị na agaghị m aṅụ mmanya a ọzọ tutuu ruo ụbọchị ahụ mụ na unu ga-aṅụ ya nꞌụzọ dị iche nꞌalaeze Nna m.”
Mgbe ha bụsịrị abụ, ha sitere nꞌebe ahụ pụọ gawa nꞌelu ugwu olivu.
Nꞌebe ahụ ka Jisọs nọ gwa ha okwu sị, “Nꞌabalị taa unu ga-agba ọsọ hapụ nanị m. Nꞌihi na e dere ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Aga m egbu onye ọzụzụ atụrụ ahụ, mee ka igwe atụrụ ya gbasasịa.’
Ma mgbe e mere ka m si na ndị nwụrụ anwụ bilie, aga m aga Galili izute unu nꞌebe ahụ.”
Pita jiri oke olu kwuo okwu sị, “Ọ bụrụ na mmadụ nile ahapụ gị gbalaa, agaghị m ahapụ gị.”
Jisọs gwara ya sị, “Nꞌabalị taa, tupuu oke ọkụkọ akwaa akwa nꞌisi ụtụtụ, ị ga-agọnarị m ugboro atọ.”
Ma Pita nọgidesịrị ike nꞌokwu ya sị, “Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwụọ agaghị m agọnarị gị.” Ndị na-eso ụzọ ya nile kwuru otu ihe ahụ.
Mgbe Jisọs bịara nꞌogige ahụ a na-akpọ Getsamane, ọ gwara ndị na-eso ụzọ okwu sị ha, “Nꞌọdụnụ nꞌebe a ka m gaa nꞌihu nke nta kpee ekpere.”
Ọ gara nꞌihu nke nta daa nꞌala, kpuo ihu ya nꞌala, kpee ekpere sị, “Nna m, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, napụ m iko a. Ma ọ bụghị uche m ka m chọrọ ka o mee, kama ka e mee ihe ị na-achọ.”
Mgbe ọ lọghachiri nꞌebe ndị na-eso ụzọ ya nọ, ọ hụrụ ha ka ha nọ na-arahụ ụra. Ọ kpọrọ Pita sị ya, “Gịnị mere unu mmadụ atọ enweghị ike soro m chee nche, ọ bụladị nwa oge nta?
Ọ laghachiri azụ nke ugboro abụọ kpeekwa ekpere sị, “Nna, ọ bụrụ na iko a agaghị agabiga ma ọ bụghị na m ṅụrụ ya ka e mee uche gị.”
Ọ lọghachikwara ọzọ hụkwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-arahụ ụra, nꞌihi na ha enweghị ike ighewe anya ha oghe.
Jisọs hapụrụ ha ọzọ gaa kpee ekpere nke ugboro atọ, na-ekwukwa otu okwu ahụ.
Mgbe ọ lọghachikwutere ndị na-eso ụzọ ya, ọ gwara ha okwu sị, “Unu nọrịrị na-arahụ ụra, na-ezukwa ike? Mbaa! Lee, oge ahụ abịala! Oge a ga-arara m nye nꞌaka ndị mmehie.
Bilienụ ka anyị na-aga nꞌihu! Lee, nwoke ahụ na-arara m nye na-abịa ugbu a!”
Mgbe ọ nọ na-ekwu okwu a, Judas, otu nꞌime ndị ozi iri na abụọ ahụ bịaruru, ya na igwe mmadụ so. Ụfọdụ ji mma agha ha, ndị ọzọ ji osisi. Ọ bụ ndị isi nchuaja na ndị okenye ndị Juu nile zitere ha.
Judas agwala ha rị na nzuzo sị, “Nwoke ahụ m ga-esutu ọnụ bụ onye unu na-achọ, jidesienụ ya aka ike!”
Ya mere, mgbe Judas bịaruru, ọ bịakwutere Jisọs sị ya, “Ekele, onye ozizi!” O sutukwara ya ọnụ.
Jisọs zara ya sị, “Enyi m, mee ihe ị bịara ime ngwangwa.” Mgbe ahụ ndị ahụ ha na Judas so bịara jide Jisọs nꞌike.
Ma Jisọs sịrị ya, “Mịghachi mma agha gị nꞌọbọ ya, nꞌihi na mmadụ ọ bụla na-eji mma egbu mmadụ ibe ya, ga-anwụ site na mma.
I cheghị na m pụrụ ịkpọ Nna m oku ka o zitere m igwe ndị mmụọ ozi, ka ha bịa napụta m?
Ọ bụrụkwanụ na m emee otu a, a ga-esi aṅaa mee ka ihe akwụkwọ nsọ kwuru mezuo? Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru na ihe ndị a na-eme ugbu a aghaghị imezu otu a.”
Mgbe ahụ Jisọs jụrụ igwe mmadụ ahụ ajụjụ sị, “Unu pụtara chịrị mma agha na osisi bịa ijide m dị ka a ga-asị na m bụ onye ohi? Anọrọ m ziekwa ihe nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke kwa ụbọchị, ma unu ejideghị m.
Ma ihe ndị a na-eme ka ihe ndị amụma dere nꞌakwụkwọ nsọ mezuo.” Nꞌoge ihe ndị a nile na-eme, ndị na-eso ụzọ ya nile hapụrụ ya gbalaga.
Ndị jidere Jisọs duuru ya gaa nꞌụlọ Kaifas, onyeisi nchụaja. Ndị ozizi iwu na ndị okenye ndị Juu zukọtara nꞌebe ahụ.
Ndị isi nchụaja, ndị okenye na ndị ụlọ ikpe ndị Juu gbalịsiri ike ịchọpụta ebubo ụgha dị iche iche ha ga-ebo Jisọs, ka ha hụ ụzọ ha ga-esi gbuo ya.
Ma ha achọtaghị ihe ọ bụla. Ọ bụ ezie na ha chọtara ọtụtụ mmadụ ndị gbalịrị ibo ya ebubo ụgha. Nꞌikpeazụ nanị mmadụ abụọ nọgidesịrị ike kwuo sị, “Nwoke a sịrị, ‘Enwere m ike ịkwatu ụlọ nsọ ukwu Chineke, wughachikwa ya nꞌụbọchị atọ.’ ”
Onyeisi nchụaja biliri ọtọ jụọ Jisọs sị, “I nweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu banyere ebubo ndị a ha na-ebo gị?”
Ma Jisọs ekwụghị ihe ọ bụla. Onyeisi nchụaja jụkwara ya ajụjụ ọzọ sị, “Eji m aha Chineke dị ndụ nye gị iwu, sị gị, gwa anyị, ị bụ Onye nzọpụta ahụ, Ọkpara Chineke?”
Jisọs zara ya sị, “Ee, abụ m ya. Nꞌezie asị m unu, na mgbe na-adịghị anya, unu ga-ahụ m, bụ Onye nzọpụta ahụ, ka m na-anọdụ nꞌaka nri Chineke. Unu ga-ahụkwa m mgbe m ga-abịa nꞌigwe ojii nke eluigwe.”
Mgbe o kwusịrị okwu a, onyeisi nchụaja dọwara uwe o yi nꞌahụ nꞌiwe, kwụo sị, “O kwuluola Chineke! Olee mkpa ọ dị ịchọkwa ndị akaebe? Unu nụkwara ajọ okwu sị ya nꞌọnụ pụta?
Gịnị bụ mkpebi unu?” Ha zara sị ya, “Ikpe mara ya, o kwesịrị ka ọ nwụọ!”
Mgbe ahụ ha malitere ịbụ ya ọnụ mmiri nꞌihu, na iti ya oke ihe otiti. Ndị ji ọbụaka ha tie ya ihe jụrụ ya sị,
“Ị bụrụ onye amụma nꞌezie, bụrụkwa Onye nzọpụta ahụ, kpọọ aha onye tiri gị ihe.”
Ma Pita gọrọ nꞌihu ha nile sị, “Amaghị m ihe ị na-ekwu.” O biliri ọtọ si nꞌebe ahụ pụọ.
Mgbe ọ pụrụ nꞌezi, nwagbọghọ ọzọ hụrụ ya, gwa ndị nwoke nọ nꞌebe ahụ sị, “Nwoke a na Jisọs onye Nazaret anọkọkwaala.”
Ọzọ kwa Pita weere ịṅụ iyi gọọ sị, “Amaghị m onye nwoke ahụ bụ.”
Mgbe oge nta gasịrị, ndị nwoke guzo nꞌebe ahụ bịakwutere Pita sị ya, “Nꞌezie, ị bụ otu nꞌime ha. Anyị esitela nꞌasụsụ ị na-asụ ghọta na ị bụ onye Galili.”
Pita malitere ịbụ onwe ya ọnụ, na ịṅụ iyi sị, “Amaghị m nwoke a ma ọlị.”
Mgbe ahụ kwa oke ọkụkọ kwara akwa. Pita chetara okwu ahụ Jisọs kwuru sị, “Tupuu oke ọkụkọ akwaa akwa, ị ga-agọnarị m ugbo atọ.” O siri nꞌebe ahụ pụọ, gaa kwaa akwa nke ukwuu.